Vaovao - nampidirina sy mandeha nanomboka ny 2021 ny tsipika famokarana DUTTILE IRON
Ny tsipika famokarana DUTTILE IRON dia natomboka ary nanomboka hatramin'ny 2021
Ny orinasa Ductile Iron dia niorina hatramin'ny 2021
1. Fampidirana fohy:
Ductile cast iron dia fitaovana vy matanjaka be namboarina tamin'ny taona 1950. Ny fahombiazany feno dia manakaiky ny vy. Miorina amin'ny fahombiazany tena tsara, dia nampiasaina tamim-pahombiazana mba hamoahana hery saro-bahana sasany ary mitaky fatratra ny tanjaka, ny hamafiny ary ny fanoherana. Ductile cast iron dia nivoatra haingana ho vy vy fitaovana faharoa ihany ny vy manipy vy sy be mpampiasa. Ilay antsoina hoe "vy solon'ny vy" dia manondro vy fatratra matetika. Ductile cast iron dia mahazo ny grafit ductile amin'ny alàlan'ny fitsaboana spheroidization sy inoculation izay manatsara ny toetran'ny mekanika vy, indrindra ny plastika sy ny hamafiny, ka mahazo tanjaka ambony noho ny vy karbonina.
Ny fantsom-by vy dia saika nampiasaina tamin'ny sehatry ny indostria lehibe rehetra, izay mitaky tanjaka, plastika, henjana, fanoherana fanoherana, fanoherana hafanana mahery vaika sy mekanika, fanoherana ny hafanana avo na ambany, fanoherana ny harafesina ary fitoniana lehibe. Mba hahatratrarana ireo fiovana ireo amin'ny fampiasa amin'ny fampiasana, ny vy metaly dia manana naoty maro, manome karazana mekanika sy ara-batana marobe.
Ny fantsom-by vy mandroraka ho an'ny faritra ambanin'ny kodiarana, toy ny fonony farany ho an'ny roller roller, ny vozon'akanjoko ho an'ny rozin'ny lalana, ny fonosana ho an'ny kamo.
5. Fahaiza-mamokatra: 500-550T / Volana, tsipika famokarana mandeha ho azy.
1) Raha ampitahaina amin'ny vy vy dia manana tombony tanteraka amin'ny tanjaka ny fantsom-by. Ny tanjaky ny vy atsofoka dia 60k, raha 31k kosa ny tanjaky ny vy. Ny tanjaky ny vy vy metaly dia 40k, raha ny vy manipy kosa tsy mampiseho ny tanjaky ny vokatra ary tapaka ihany. Ny tahan'ny hery vy amin'ny vy dia ambony lavitra noho ny vy nariana. Ny tanjaky ny vy metaly dia azo ampitahaina amin'ny vy vy.
2) Raha ampitahaina amin'ny vy vy, ny vy mandrotsaka Ductile dia manana tanjaka avo kokoa noho ny vy vy. Ny vidin'ny vy vita amin'ny bolongam-bolan-jaza dia mahatonga an'ity fitaovana ity ho malaza kokoa, ny fahombiazan'ny fanariana dia ambony kokoa, ary ny vidin'ny masinina vy an-tsipika grafika boribory dia ahena.
3) Noho izany, aorian'ny fizotran'ny tsindrona vy amin'ny fantsom-pandrefesana amin'ny alàlan'ny tsimokaretina fanamoriana, ny rafitra spherical ao anatin'ny vy fantsom-pandrefesana dia afaka manafoana ihany koa ny fisehoan-javatra manaparitaka fa mora ny mamokatra grafitika mikitroka ao anaty vy. Ao amin'ny microphotograph an'ny vy ductile, ny triatra dia azo atao mijanona aorian'ny nahatratrarana ny baolina grafita. Ao amin'ny indostrian'ny vy ductile, ireto bolongana grafita ireto dia antsoina hoe "crack stoppers" noho ny fahafahany misoroka ny vaky.
Fotoana fandefasana: Jun-17-2021